Mystery - Myanmar Asian TV
Room No.9 ( 2018 )
ဒီရက်ပိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်တွေအများကြီးထွက်တဲ့ထဲကမှ ဒီတစ်ခေါက် MMATVကတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ကားလေးက Room9ဆိုတဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေကတော့ Kim Young Kwang (Lookout,Sweet Stranger and Me,D Day..စတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲကမင်းသား) မြန်မာပရိတ်သတ်တွေလီဟန်နီလို့သိကြတဲ့ မင်းသမီး Kim Hee Seon သရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးကြီး Kim Hae Sook တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့~~~ နာမည်ကြီးဥပဒေအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုရဲ့ရှေ့နေအောဂျီဟေးရီဟာပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်ခယမြှောက်ပင့်ပြီးမရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုတော့အထင်သေးနှိမ့်ချဆက်ဆံတတ်သူ သူ့အမှုနိုင်ဖို့ဆိုရင် ဘာမဆိုလုပ်တတ်တဲ့လူစားမျိုး…
Creepy ( 2016 )
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ၂၁ ရာစု လက်ရှိလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဟာကွက်ကို မီးမောင်းထိုးထားတဲ့ကားလေးပါ တစ်နေ့ အမှုတစ်ခုမှာ ဒဏ်ရာရလိုက်လို့ ရဲဝန်ထမ်းဘဝက နှုတ်ထွက်သွားသူတစ်ယောက် သာမန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းဆရာလုပ်နေပေမယ့် ထူးဆန်းတဲ့ အမှုမပိတ်သေးတဲ့လူပျောက်မှုကို စုံစမ်းခဲ့ရာ ဘယ်လိုထူးဆန်းတာတွေ တွေ့ရမလဲ? သူမိသားစုနဲ့ပါ ဘယ်လိုပတ်သက်မှုမျိုးရှိလာမလဲ? ဒီလိုအမှုတွေနောက်ကွယ်က အပြစ်သားကရော ဘယ်သူလဲ? လူသတ်သမားကိုရောသူဖော်ထုတ်နိုင်မှာလား? “Creepy”ဆိုတဲ့ဂျပန်သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်လမ်းလေးကိုကြည့်ရင်းပရိသတ်ကြီးလည်းရသမျိုးစုံခံစားရမှာပါ Translator : Babe Princess…
Gonjiam: Haunted Asylum ( 2018 )
ဒီတစ်ခါတော့4လအပိုင်းကမှထွက်ထားတဲ့ကိုရီးယား horrorကားကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ဒီကားလေးကကိုရီးယား horrorရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ ဒုတိယလူကြည့်အများဆုံးရုပ်ရှင်ပါ Rating မှာလည်း IMDb 6.2/10,Rotten tomatoes 80%,star2.com 7/10ထိရရှိထားပါတယ် စရိုက်တနြ်းကUS $2.28 millionပဲအသုံးပြုထားပေယ့်Box officeမှာUS$19.9millionထိရရှိခဲ့တဲ့ကားပါ ဆေးရုံနဲ့ပတ်သတ်တဲ့သတင်းတွေကလည်းအများကြီးပါပဲ ဒီဇာတ်ကားဇာတ်လမ်းတည်ထားတဲ့ ဆေးရုံက CNNကရွေးချယ်ထားတဲ့ကမ္ဘာ့ကြောက်စရာအကာင်းဆုံး၇နေရာထဲမှာပါ ပါတယ် ဆေးရုံအုပ်က ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကော လူနာတွေကိုကောသတ်ပစ်တယ်လို့ပြောကြတယ် သူကလည်းအဲ့နောက်ပိုင်းပျောက်သွားတယ်လို့ဆိုကြတယ် တစ်ချို့ကြတော့လည်းငွေကြေးအထောက်အပံ့မပြည့်စုံတော့တာရယ် ဆေးရုံရဲ့မိလ္လာစနစ်တွေမကောင်းတော့တာရယ်ကြောင့် လူနာတွေကိုတခြားပြောင်းပစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ် ဆေးရုံကတော့၁၉၈၀…
Korea Ghost Story-4 : Forbidden Book ( 2008 )
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ … မြို့ထဲမှာ တားမြစ်စာအုပ်တစ်အုပ်ဟာ ပြန့်နေပြီတော့ ထိုအုပ်ကို ဖတ်မိတဲ့သူတွေဟာ ထိုစာအုပ်ကို ရေးခဲ့တဲ့သရဲ ပူးကပ်ခြင်းခံရပါတယ် … ထိုပူးကပ်ခံရသူက အစေခံဖြစ်လျှင် ထိုအစေခံသည် သူ၏သခင်ကို ပြန်သတ် ဇနီးမယားဖြစ်လျှင် ခင်ပွန်းသည်ကို ပြန်သတ်၍ ကလေးဖြစ်လျှင် ထိုကလေးသည် မိဘအား ပြန်သတ်ကြလေတယ် … မြို့ထဲတွင် ထိုတားမြစ်စာအုပ်ဟာ သရဲထွက်လာတဲ့စာအုပ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးပါတယ် … ထိုအမှုအား…
Haunted Campus ( 2016 )
Japan Movie ဆိုပြီး တကျော်ကျော် အော်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် Japan Movie လေး နောက်ထပ်တစ်ခုကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် … Haunted Campus လို့ အမည်ရပြီး Mystery , Horror , Romance & School စသည်ဖြင့် ရသပေါင်းများစွာ ပေးစွမ်းနိုင်မယ့် ဇာတ်ကားလေး တစ်ကား ဖြစ်ပါတယ် ……
Another ( 2012 )
ဒီတခေါက် တင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ 2012 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Another လို့ အမည်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ … ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Anime ကို အခြေခံပြီး ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Live Action လေးလဲ ဖြစ်ပါတယ် … Main Cast တွေ အနေနဲ့ကတော့ JMovie ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အသည်းစွဲဖြစ်တဲ့ မင်းသား Kento…